Xasan Shiikh: "Al-shabaab looma raacan doono danbi hadii ay isa soo dhiibaan"
Home Somali News Somali Government Xasan Shiikh: “Al-shabaab looma raacan doono danbi hadii ay isa soo dhiibaan”
Xasan Shiikh: “Al-shabaab looma raacan doono danbi hadii ay isa soo dhiibaan”
Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Shiikh Maxamuud, ayaa sheegay ineeysan ka aarsan doonin dadka ku jira Al-shabaab hadii ay doowlada isku soo dhiibaan.
Madaxweynaha ayaa hadalkaan kasheegay kadib kulan uu la qaatay Ardayda iyo Jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku dhaqan dalka Sudan, madaxweynaha ayaa sheegay in hadda iyo wixii ka danbeeya ay Cafis yihiin dhalinyarada la qalday ee ka barbar dagaalanta Al-shabaab, wuxuuna tilmaamay in shaqooyin loo abuuri doono cidii diyaar u ah ineey isa soo dhiibto.
Madaxweynaha ayaa sidoo kale sheegay in dhalinyarada Al-shabaab ka barbardagaalanta aysan faa’iido ugu jirin daadinta dhiiga shacabka Soomaaliyeed iyo dadka walaalahooda ah.
Madaxweyne Xasan Shiikh iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa hada kusugan dalka Sudan Caasimadiisa Khartuum, isagoona halkaas uga qayb galaya Sanad guuradii 52-aad ee kasoo wareegtay markii dalkaas uu Xurnimadiisa qaatay.
Waxaa xusid mudan in doowlada ay Al-shabaab marwalbo ugu baaqdo nabad iyo wanaag, laakiin ay iyagana halkooda kasii wadaan goowrac, miino aasid, dilal qorsheysan iyo ineey habeenkii shacabka ku soo ridaan madaafiicda Hoobiyayaasha.